I-Phcoker Professional Factory Yezemithi Ephakathi Nezama-API
Ibhizinisi elikhethekile ngamaphakathi abasebenza ngemithi (API)
I-ISO9001: imithetho ye-2000 nokuhambisana namazinga we-cGMP.
Ngaphezulu kweminyaka engu-20 isipiliyoni semithi yezokwelapha nge-support ehlobene ngokwanele yezobuchwepheshe.
Ngezimpumelelo zakamuva zesayensi nezobuchwepheshe, ukukhiqizwa kwe-Shangke kuphumelela kakhulu futhi ku-eco-friendly.
Ithimba lethu lenkonzo yamakhasimende linikeza ukusekelwa okugcwele kwezobuchwepheshe nokwesayensi ezingeni eliphezulu kakhulu kumakhasimende ngesikhathi esifanele.
Imikhiqizo yethu Core
1. Palmitoylethanolamide (PEA) uhlolojikelele 2. Iyini Palmitoylethanolamide (PEA)? 3. Izinzuzo zePalmitoylethanolamide - Engi...
1. Isingeniso 2. I-Nicotinamide Mononucleotide Engaqondakali (NMN) 3. I-Nicotinamide Mononucleotide ne-NAD+ 4. I-Res yakamuva...
I-Phcoker ingumkhiqizi ochwepheshe we-magnesium L-threonate onohlelo oluphelele lokukhiqiza olungaqinisekisa inqwaba ...
Ukubuka konke kwe-Galantamine Hydrobromide IGalantamine hydrobromide umuthi kadokotela osetshenziselwa ukwelapha ukuwohloka komqondo kwezifo ze-Alzheimer's ...
Ukubuka konke kwe-PRL-8-53 I-hype ye-PRL-8-53 njengesidakamizwa esisebenza ngengqondo emuva kuma-1970s okuqala. UNikolaus Hansl, uprofesa e-C ...
I-Cycloastragenol Uhlolojikelele I-Cycloastragenol (CAG) eyaziwa nangokuthi i-T-65 iyi-tetracyclic triterpenoid yemvelo etholwe ku-Astr ...
I-Nicotinamide riboside (NR) ne-nicotinamide riboside (i-Chloride) i-Nicotinamide riboside (NR) i-chloride iyindlela eneklorini ye-n ...
Yini i-Oxiracetam? I-Oxiracetam ingenye yezithako ezindala ze-nootropic ezivela emndenini we-racetam. Kwakuyi-racetam com yesithathu ...
Kuyini i-9-ME-BC? I-9-Me-BC (9-Methyl-β-carboline) eyaziwa nangokuthi yi-9-MBC iyinhlanganisela yenoveli ye-nootropic evela eqenjini le-β-carboline. ...
Amalebhu eR & D
Bhalisa ukuze uthole ukwaziswa kwamuva mayelana neNkampani yethu.